Akụkọ Mgbasa ozi |
Anyị abụghị naanị ndị na-emepụta ihe na-eme Ikanam
site ha na 21-03-24
Enwere okwu ochie ndị China: Ndị ahịa bụ eze, nke pụtara na ị bụ onye kachasị ọnụ ahịa maka anyị. N'okwu a, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị. Ọrụ anyị abụghị naanị ịmịpụta panel ahụ kamakwa iji nye gị ezigbo ọrụ ngo. Dịka ọmụmaatụ, anyị anatawo ord ...
Nzipu maka Lebanon Ihuenyo
Nbunye maka Lebanon ikanam Inkwà Na December, anyị na-anapụta Ikanam Ngosipụta na Lebanọn. Mgbidi anyị dị na mgbidi dị mma, anyị na-enyekwa nkwa nke afọ 2. Anyị nwere nlezianya Ogo: Anyị na-anwale usoro ọ bụla nke mmepụta (ule na ịka nká maka Module Ikanam - Ikanam kabinet ma ọ bụ ikanam panel - Ikanam s ...
Nbunye maka Thailand LED Display
Nbunye maka Thailand LED Display Na Disemba, anyị na-ebugharị Mgbidi Video ikanam na Bangkok, Thailand. Mgbidi anyị dị na mgbidi dị mma, anyị na-enyekwa nkwa nke afọ 2. Anyị nwere njikwa njikwa dị mma: Anyị na-anwale usoro ọ bụla nke nrụpụta (ule na ịka nká maka Module ikanam - ikanam ma ọ bụ ikanam ...
Nzipu maka akwa Ogo Slovenia ikanam gosipụtara
Nbubata maka ihe nlere gosiputara na Slovenia ikanam gosiputara na onwa Nọvemba, anyi n’enye ndi nlere vidiyo n’ime oku na Slovenia. Anyị ikanam Video reenskwà bụ nke elu mma, na anyị na-enye nkwa nke afọ 2. Anyị nwere njikwa njikwa siri ike: Anyị na-anwale usoro ọ bụla nke nrụpụta (ule na ịka nká maka Ikanam Modul ...
Ndị ahịa si Thailand bịara na ụlọ ọrụ anyị maka ngosipụta ikanam na October 16th
Na October 16th (Tuesday), ndị ahịa anyị si Thailand gara ileta ụlọ ọrụ anyị. Ha na-ekwu okwu ọma banyere njem ụlọ ọrụ; anyị Ikanam Display ogwe na ọrụ anyị na anyị Professionalism merie ha mmara na ntụkwasị obi. Ha na-ewetara m ụfọdụ nri pụrụ iche nke Thailand, nke m na-achọta ...
Ndị ahịa si Chile bịara ileta ụlọ ọrụ anyị maka Pantallas LED na Sept 26
Na Septmerber 26th, ndị ahịa anyị si na Chile kwụrụ ụgwọ na ụlọ ọrụ anyị. Ha kwụrụ ọtụtụ ihe na Pantallas ikanam Publicidad para Exteriores (Outdoor Advertising LED Screens) 10m * 3m na 4m * 3m. N'oge njem ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị na-atụle ọtụtụ ajụjụ ha metụtara na nkọwa. Mgbe omumu maka ...
Ndị ahịa si Chile bịara na facotory anyị (maka Pantallas de LEDs) n'oge Mee 24 ruo 29th
N'ime May 24th ruo 29th, ndị ahịa anyị si na Chili gara leta ụlọ ọrụ anyị. Ha kwụrụ ụgwọ dị ukwuu na Pantallas ikanam (ikanam ngosi ihuenyo) 6m * 4m. Ha na-ekwu okwu ọma banyere njem ụlọ ọrụ; ngwaahịa anyị na ọrụ anyị yana ndị ọkachamara anyị emeriwo mmata na ntụkwasị obi ha. An ...
Ndị ahịa anyị si Italytali gara leta ụlọ ọrụ anyị na June 27th
Na July 27th (Wenezde), ndị ahịa anyị si paidtali gara leta ụlọ ọrụ anyị. Anyị gosipụtara akụkụ niile metụtara ndị nlele anya anyị / Igwe nyocha, dị ka: usoro mmepụta etu LED Display si arụ ọrụ otu esi ejikwa otu esi etinye otu esi arụzi otu esi arụ ọrụ - Ngwaahịa anyị ...